भारतबाट धान बोकेर आएको ट्रक खोल्दा प्रहरीले यस्तो के देख्यो ? ट्रकसहित २ जना पक्राउ – Sudarshan Khabar
भारतबाट धान बोकेर आएको ट्रक खोल्दा प्रहरीले यस्तो के देख्यो ? ट्रकसहित २ जना पक्राउ
भारतबाट धान बोकेर आएको ट्रकलाई सर्लाही भन्सार चेकपोष्ट मलङ्गवामा जाँच गर्ने क्रममा रु १७ लाख ९० हजार नेपाली बरामद भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय ट्रकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जिल्ला सुरक्षा वेस मलङ्गवाको टोलीले बुधबार सर्लाही भन्सार चेकपोष्टमा जाँच गर्नेक्रममा उक्त रकम बरामद गरेको हो ।
भारतको विहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको मुजेलियाबाट धान बोकेर नेपाल भित्रियाउन लागिएको बिआर ३० जिए २४५८ नम्बरको भारतीय ट्रकबाट रु १७ लाख ९० हजार नेपाली बरामद भएको सर्लाहीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गङ्गाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रकका चालक रामललित मण्डल र सहचालक नीरज कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएको उँहाँले बताउनुभयो । दुवै जना भारतीय नागरिक रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भारतबाट धान लिएर आएको ट्रक सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको राईस मिलमा जान लागिएको थियो । बरामद रकम हुुण्डी कारोवारीको हुुनसक्ने सशस्त्र प्रहरीको अनुुमान छ ।
बरामद रकम सर्लाही भन्सार कार्यालय मलङ्गवमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सञ्जीतकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
आज साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न प्रधानमन्त्रीको अपिल (भिडियो) एक शेयर गरि सबैलाई जानकारी दिनुहोस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बिहीबार साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न देशवासीसमक्ष अपिल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाभाइरसबाट जीवन गुमाएका तथा रोल्पा बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका प्रति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनले संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने लक्षण देखिएको बताएका छन् ।
महामारीले भयावह रुप लिन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई सजग हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।
‘सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरुका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धासुपन अर्पण गरेका छन् ।